ယခု ရုရှားမှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်စီတို့ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ပုံနှင့်တကွခြိမ်းခြောက် | Buzzy
Copyright © 2020 Buzzy. All rights reserved.
ယခု ရုရှားမှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်စီတို့ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ပုံနှင့်တကွခြိမ်းခြောက်
Sai Kyaw Zin Thant
တောေ်တ်ာဆိုးလာတဲ့ ISIS တွေ
ISIS အဖွဲ့ပာာ ဒီလာမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်စီတို့ကို ပစ်မှတ်ထားလုပ်ကြံရန် ခြိမ်းခြောက်စာများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခြိမ်းခြောက်စာမတိုင်ခင် ကမ္ဘာဖလားပွဲတွင် တိုက်ခတ်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်စာအများအပြား ယခင်ကလည်းပို့ထားခဲ့ပါတယ်။
ပုံထဲမှာမြင်တွေရတဲ့အတိုင်း ISIS အဖွဲ့တွေပာာ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်စီပုံကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ကာ အကြမ်းဖက်သမားများ ခေါင်းဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုထုတ်ဝေကာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ဟာလည်း " မင်းတို့ရဲ့သွေးတွေပာာမြေပေါ်ခစေရမယ်လို့"ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
ယခုလတ်လောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက မိသားစုလိုက်အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခတ်မှုပာာ ၄င်းတို့ရဲ့စေခိုင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပြီး ထိုအသေခံဗုံးပေါက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ယခုခါမှာလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအတွက် အဓိကပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်စာများနှင့်ဓာတ်ပုံများတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပာာလည်း လုံခြုံရေးကို တိုးမဖောက်နိုင်အောင် ထားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာလူးကြော်ဘူးခွံလေးနဲ့ Handmade ပစ္စည်းလေးတွေလုပ်ရအောင်
သရုပ်ဆောင်တွေက ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက် အမှန်တကယ် ချစ်တင်းနှောခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၁၂ ကား
အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ဒီမိန်းကလေးတွေကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ. ပထမဆုံးသော ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်း လုံးဝမရှိတဲ့ K-Pop အဖွဲ့
ဘဏ်ကိုဝင်ရောက်လုယက်သွားတဲ့ သီလရှင်နှစ်ဦး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်းသိရ
ဘယ်သူမှသတိမထားမိတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှ အမှားများ
နိုင် ငံတကာ စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်
မိုးလေးဖွဲဖွဲကျနေချိန်မှာ စားလို့ကောင်းမယ့် သွားရေစာလေးတွေ
ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင် များအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အစားအစာ (၉) မျိုး